UNomad ujoyina iBlack Friday ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwi-30% | Ndisuka kuMac
UNomad ujoyina uLwesihlanu omnyama ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwi-30%
Into entle ngeNomad kukuba ineemveliso ezikumgangatho ophezulu ezinokuthengiswa ngokulula yiApple ngokwayo. Kule meko, inkampani ngokufanelekileyo ijoyina iphulo le-Black Friday ukongeza isaphulelo kwezinye izincedisi zayo ezininzi ukuya kuthi ga kwi-30%. Kwabo bethu bahlala eSpain ezi zaphulelo zinokuba nomdla kodwa njengoko sihlala sisithi kungcono ukuthenga ngokuthe ngqo ezivenkileni kwilizwe lethu ukunqanda iifizi zokuthumela ezithi ziphakame kakhulu.
Kodwa masigxile kwizaphulelo. Kule meko sinokufumana isaphulelo se-30% kwiimeko zesikhumba ezimdaka kunye nezimnyama kwisizukulwana sesithathu see-AirPods, kuyo yonke imibala ekhoyo ye-AirPods Pro kunye nee-AirPods. Kwakhona kunjalo kukho isaphulelo kuqweqwe lwesikhumba kwiimodeli ezahlukeneyo ze-iPhone, i-iPad okanye i-AirTags. Inyaniso kukuba ezi zinikezelo zinomdla kwabo bathanda izixhobo eziphezulu zesikhumba. I-Nomad ine-assortment efanelekileyo yeemveliso ezibandakanya ezinye izincedisi ezifana nezipaji zesikhumba kunye nezinye iimveliso zezixhobo ezingaphandle kwe-Apple.
Kule meko, iwebhusayithi yeMacnificos inika abasebenzisi ukhetho olungcono kakhulu lokuthenga kunelo linikezelwa yiwebhusayithi yeNomad kubasebenzisi abahlala apha. Kwimeko nayiphi na into, izibonelelo zikhona kwiwebhusayithi yeNomad kwaye ngokusengqiqweni ezi zinako kunceda abasebenzisi abaninzi ke eyona nto ilungileyo malunga noku kukwabelana nabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » UNomad ujoyina uLwesihlanu omnyama ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwi-30%
Amarhe abeka ukuqaliswa kwe-HomePod enemibala e-Italiya ngomso
Ibhinqa liginya i-AirPod endaweni ye-ibuprofen